I-HBO Spain sele inesicelo se-Smart TV, kodwa ayisiyiyo yonke | Iindaba zeGajethi
I-HBO Spain sele inesicelo se-Smart TV, kodwa ayisiyiyo yonke
UIgnacio Sala | | Ukusasaza, ZeThelevishini
Ukufika kwe-HBO eSpain kwakunzima kwaye mhlawumbi sisiphumo sokungxama. Nangona kuyinyani ukuba inika bonke abasebenzisi beqonga layo ithuba lokukwazi ukonwabela konke okukuyo ngokusebenzisa indalo eyahlukeneyo, bekungekho sicelo seTV zeTV, ezinyanzele abasebenzisi ukuba badibanise izixhobo zabo kumabonwakude ngeendlela ezahlukeneyo ukuba Bafuna ukonwabela umxholo weHBO kwiscreen esikhulu ekhaya. Kodwa kubonakala ngathi ukulinda kugqityiwe, njengoko inkampani yokusasaza sele injalo uqalise usetyenziso olunikezelweyo lweTV ezikrelekrele, kodwa kuphela kwiimodeli zeSamsung.
Ngelixa kuyinyani ukuba i-Samsung ngukumkani ekuthengiseni olu hlobo lwesixhobo, i-LG, eyona imbangi yayo inkulu, ikwanesabelo sentengiso kweli candelo, kodwa ayinaso isicelo semveli sokuyonwabela, phakathi kwabanye, Umdlalo weZihlalo zobukhosi ngendlela enkulu. Ngokutsho kwe-HBO, esi sicelo siyahambelana Zonke iiTV zeSmart TV zenziwe ukusukela ngo-2012 kude kube ngokuqondakalayo kwezi ntsuku. Ukuze sikwazi ukuyisebenzisa, kufuneka sihlaziye isoftware kamabonakude ukuze ivele ngendlela yesicelo.
Okwangoku kubonakala ngathi izicwangciso zokumiliselwa kwesicelo se-LG azicingelwanga okanye ubuncinci inkampani ayichazanga nto ngayo. Akukho zindaba malunga nokuqaliswa kwesicelo seSony kunye neMicrosoft consoles. Okwangoku ngabasebenzisi be I-Apple TV, iVodafone TV, i-iOS kunye ne-Android Banesicelo semveli sokukwazi ukonwabela inkonzo ngokuthe ngqo kwizixhobo zabo.
Ke baya kuthi ukuba iNetflix inesikhundla esiphambili, ukuba iyayilawula intengiso, ukuba le, ukuba enye ... INetflix enjengeSpotify inikezela ngezicelo ukonwabela umxholo wazo ngokusasaza kulo naliphi na iqonga onokuyicinga kwaye ngokucacileyo, inethuba lokuyenza. Ukuba usungula inkonzo yolu hlobo kwaye ufuna ukuba ithandwe, kuya kufuneka ukhumbule ukuba ukuba awunikezeli ngeendlela, kunzima kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umfanekiso kunye nesandi » Ukusasaza » I-HBO Spain sele inesicelo se-Smart TV, kodwa ayisiyiyo yonke
Ewe, kancinci kancinci iya kuvela kwezinye iitv. Okwangoku kufuneka sihlawule yonke into ekhoyo.
Kubonakala kungakholeki ukuba inkonzo enkulu kangaka ayinakukwazi ukuqala ngayo yonke imisebenzi eyenziweyo. Akukho ndlela yokubukela nantoni na ngaphandle kokuqhagamshela isixhobo (hayi i-ps4) kwiTV
Umxholo uyathandeka, kodwa njengomsebenzisi we-LG TV kunye nePS4 ndikufumanisa kunzima ukukholelwa ekubeni kufuneka ndibuyele kunyaka ka-2000 kwaye kufuneka ndidibanise ikhompyuter ngentambo kwiTV ukubukela uthotho lweHBO okanye imovie.
Ndikwinyanga yokulinga kwaye ngokuqinisekileyo ndiza kuyirhoxisa yakugqiba. Andibonanga kwanto, kuba eli ayiloxesha lokuba neengcingo kunye nokudibanisa iikhompyuter. Lonto idlulileyo.
Molo, ungandixelela ukuba ungayikhuphela njani i-Spotify kumabonwakude wam omtsha we-LG ngeWEBOS 3.5? Njengoko kubonisiwe ezindabeni, ithi iyafumaneka njengeNetflix, kodwa andiyifumani.
Iifacebook zikhuphela usetyenziso lweNdlu yaseKhaya ukwenza usetyenziso lokufowuna ividiyo